कुराकानी/विचार – Karnalisandesh
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरेको एक महीना पूग्नै लागेको छ। यो अवधिमा केही सकारात्मक कदम चालेका छौं। अब यो नयाँ पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ ? कसरी काठमाडौँबाट गाउँगाउँसम्म पुग्छ? कसरी काम गर्छ ? जनताका मुद्दा कसरी उठाउँछ? यी सबै प्रश्नको उत्तर खोज्नुअघि एमालेमा किन विद्रोह भयो भन्ने विषयमा संक्षिप्त चर्चा गर्नु आवश्यक हुन्छ। पार्टी विभाजन हुनुको मुख्य कारण अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अहंमता नै हो भन्नेमा
काठमाडौँ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले बाेल्ने अभिव्यक्तिहरु प्राय: चर्चामा रहने गर्दछन्। तर, पछिल्लो समय उनले दिदै आएका अभिव्यक्तिले भने माओवादी आन्दोलन र पार्टीको भविष्यमाथि नै गम्भीर संकट र्सिजना गर्ने खालका देखिन्छन्। उनका अभिव्यक्तिमाथि विभिन्न टिकाटिप्पणी सुनिन थालेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक मञ्चहरुबाट आफ्ना कमजोरीहरु स्मरण गर्ने र आलोचित हुने क्रम एकाध वर्
काठमाडौँ। कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा राखेर एकता गर्दा राम्रो हुन्छ कि भनेर मैले आफैँ प्रस्ताव गरेको थिएँ । तर, दुर्भाग्य, त्यो पाँच वर्ष पनि टिक्न सकेन । काँग्रेसले चुनाव जितेर पनि पाँच वर्षसम्म टिक्न नसकेको तीतो यथार्थ हामीले पञ्चायतविरोधी आन्दोलनपछि भोगेका थियौँ । समाजवादी आन्दोलनका क्रममा कम्युनिस्टभित्र भएको त्यो ध्रुवीकरण पनि पाँच वर्ष टिकेन । बरु, भयानक प्रतिगमनका नाइकेहरू नै कम्युनिस्टभित्र
काठमाडौँ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसालले कार्यदलले अघि सारेको १० बुँदे लागू भएन भने पार्टी विभाजन अपरिहार्य बन्ने दाबी गरेका छन्। साथै उनले १० बुँदे कार्यान्वयन नगरे पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग रहन नसक्नेसमेत जानकारी दिएका छन्। साथै उनले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कर्मले एमालेको घरमा मेलम्ची पसेको तर्कसमेत गरेका छन्। आइतबार अनलाइनखबरसँग दिएको अन्तरवार्तामा उनले भनेका छन्, ‘५ पु
अशिक्षा, आर्थिक अवस्था कम्जोर र बालविवाह गर्दा हुनसक्ने समस्याको बारेमा जानकारी नभएकै कारण ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकाहरु उमेरै नपुगी वैवाहिक जिबनमा जोडिन बाध्य छन्। २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्नु र गराउनु कानुनी अपराध हो भनी वि.स. २०७२ को संविधानमा जारी गरिएको छ। नेपालको बालअधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागी नेपाल सरकारले नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ३९ मा बालबालिकाको हकलाई सुरक्षित गर्दै बाल अधि
काठमाडौँ। अन्ततः जनता समाजवादी पार्टीका केही सांसदहरुको पद धरापमा परेको छ। अध्यक्षद्वय महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव पक्षको खिचातानिमा अल्झेको जसपाको कार्यकारिणी सभाका सदस्यहरुको हेड काउन्टबाट विवादको निरुपण गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले सोमबार पार्टीका कार्यकारिणी सदस्यहरुको दस्तखत संकलन गरेर बिबाद समाधान गरेको हो। उपेन्द्र पक्षले पार्टीको आधिकारिकता प्राप्त गर्यो। खासगरी एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्र
देउवाले ओलीबाट सिक्नुपर्ने पाठ र गर्नुपर्ने काम
काठमाडौँ। २८ असार २०७८ इतिहासका र राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थीहरुका लागि अनुसन्धान अनि अध्ययनको विषय बन्ने नै छ। उक्त दिन दुई तिहाई शक्तिका साथ सत्तामा पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अदालतले अपदस्त गरेको दिन। देशी तथा विदेशी शक्तिहरुले नियालेको दिन। नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग सिर्जना भएको दिन। आत्मरतिमा रमाउने, आत्मकेन्द्रित बन्ने र गुटगत शैलीको सिकार बनेका ओलीले त्याग निष्ठा र समर्पणको रा
विश्वका संविधान र संसदीय व्यवस्थालाई नियालेर हेर्ने हो भने नेपालको संविधान र संसदीय व्यवस्था फरक छ। हिजोका दिनमा पनि हामीले यहि कुरालाई जोडले भन्दै आएका थियौं। तथापी, प्रगतिशील संविधानको खिलापमा परम्परागत सोच, शैली र चेतनाका आरधामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक ५ पुस २०७७ मा र दोस्रो पटक ८ जेठ २०७८ सालमा संसद विघटन गरे। पहिलो पटक पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक कारण देखाएर संसद विघटन
हाल चारवटा संटकका बीच देश अघि बढिरहेको छ। राजनीतिक, संवैधानिक, नैतिक र स्वास्थ्य संटक। अरु कसैका कारणले नभएर नितान्तै हाम्रै कारणले यि संटकहरु आइलागेका हुन्। अलि जोडले भन्ने हो भने वर्तमान सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षि दलका कारण उल्लेखित संटकहरुको सामना देशले गर्नुपरेको हो। आगामी भदौमा पार्टीको महाधिवेशन गर्न नसकेको खण्डमा राजनीतिक र कानूनी हैसियत गुमाउने कांग्रेस अहिले चरम आन्तरिक विवादमा जाकिएको छ।